TRUESTORY: နိုင်ငံရေးသမားတဲ့လား . . . ..ရဲရဲမေး၊ ရဲရဲဖြေ
နိုင်ငံရေးသမားတဲ့လား . . . ..ရဲရဲမေး၊ ရဲရဲဖြေ
စိတ်ရှိရမည်ဖြစ် ၏။ မိမိအကျိုးနှင့်နိုင်ငံသားအကျိုး
ယှဉ်တွဲလာပါကလည်း နိုင်ငံ သားအကျိုးကို ရေရှည်ကြည့်၍
ရှေးရှုရပ်တည်လိုစိတ်ရှိကြရမည် လည်းဖြစ်၏။ ထို့အတူ မိမိအကျိုးနှင့် နိုင်ငံတော်အကျိုးယှဉ်တွဲ လာပါကလည်း နိုင်ငံတော်၏ဂုဏ်သိက်္ခာ၊ နိုင်ငံတော်၏ပါဝါ၊ နိုင်ငံတော်၏အဆင့်အတန်းအတွက် စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်ဖို့ အသင့် ရှိနေသော စစ်မှန်သည့်နိုင်ငံသားစိတ်ဓာတ်ရှိသူ အရေအတွက် နည်းခြင်း၊ များခြင်းသည် နိုင်ငံ၏တိုးတက်ခြင်း၊ ဆုတ်ယုတ်ခြင်း အဖြေလည်းဖြစ်၏။ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စပြု နိုင်ငံတော်အခင်း အကျင်းသစ်ကာလတွင် နိုင်ငံသားအားလုံး
သည်နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ် နိုးကြားတက် ကြွစမြဲလည်းဖြစ်၏။
နိုးကြားတက်ကြွသော နိုင်ငံ ရေးစိတ်ဓာတ်တွင် ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ပညာဉာဏ်ကိုရှေးရှုသည့် စိတ်ဓာတ်သည် တိုးတက်သောနိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်
ရာတွင် နိုင်ငံသားအားလုံးထားရှိအပ်သည့်စိတ်ဓာတ်လည်း ဖြစ်၏။ ယခု အခါ နိုင်ငံရေးသမား
များ၊ နိုင်ငံ့အရေးဆောင်ရွက်လိုသူများ၊ အလွန်တရာများပြားလာသည်ကို ကြိုဆိုကြရမည်လည်း ဖြစ်၏။ သို့သော် အနှီပုဂ်္ဂိုလ်တို့၏အသိစိတ်ဓာတ်များသည် အမှား၊ အမှန်၊ ဓမ္မ-အဓမ္မ၊ ဖြစ်သင့်သည့်အရာ၊ မဖြစ်သင့်သည်အရာ၊ ပြုလုပ်သင့် သည်အရာ၊ မပြုလုပ်သင့်သည့်အရာအား အတ်္တစွဲ၊ဆန္ဒစွဲကင်းလွတ် စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်ဉ ဏ်ရည်အဆင့်အတန်း၊ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ၊ စစ်မှန်မျှတခြင်းသည် တိုင်းချစ်စိတ်၊ ပြည်ချစ်စိတ် ရှိသော နိုင်ငံသားတိုင်း၏ “စံ”ပေတံလည်းဖြစ်၏။ မိမိနိုင်ငံအား ချစ်သည်၊ မိမိလူမျိုးအား ချစ်သည်ဆိုရာ၌ အစွန်းရောက်အယူ အဆများ၊ တစ်ဖက်ကမ်းခတ်သွားသည့်အခါတွင် ချစ်ရာမရောက်၊ နှစ်ရာရောက်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များအား ယထာဘူတ ကျကျ ဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်ပါကတွေ့ကြရမည်ဖြစ်၏။ မိမိလုပ် ရပ်သည် မိမိနိုင်ငံနှင့်မိမိလူမျိုးအား
နှစ်ရာကျနေသည်။ စုန်းစုန်း မြုပ်ရာကျနေသည်ကို ပညာဉ ဏ်သတိဖြင့်ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုကင်းလွတ်နေသော
အစွန်းရောက်နိုင်ငံရေးသမား သူရဲကောင်းလုပ်လို သူ များပြားလာခြင်းသည် အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်းထံသို့ ကံကောင်း ခြင်းများထက် ကံဆိုးခြင်းများသာ သယ်ဆောင်လာတတ်ကြသည် ကိုလည်း သတိပြုကြဖို့လို၏။ အမှန်ကိုဆိုရသော် . . .နိုင်ငံတစ် နိုင်ငံ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတိုးတက်ခြင်း၊ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းရလဒ် လည်းဖြစ်၏။ အတွေးအခေါ်အယူအဆ၊ ဉာဏ်ပညာနှင့်အတူ ချင့်တွက်မျှော်ထောက်မှုအရည်
အသွေးပြည့်မီသည့်နိုင်ငံသားဦးရေ များပြားသောနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအပေါ်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းတရား၊ မျှတသောမေတ္တာ၊အရည်အချင်းရှိသောအကောင်းဆုံးဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်သောခေါင်းဆောင်များ(သို့မဟုတ်)
အစိုးရတစ်ရပ်ရှိသော နိုင်ငံသည်တိုးတက်၏။ဖွံ့ဖြိုး၏။ ၀င့်ထည်၏။ ယခုအခါ လူတိုင်း၏ နှုတ်ဖျားတွင်ကြားလာရသည့်စကားတစ်ခွန်းသည်ကား . . . .။
စစ်မှန်သောနိုင်ငံရေးသမားဟူသည် နိုင်ငံကို တိုး တက်စေချင်၏။ ဖွံ့ဖြိုးစေချင်၏။ နိုင်ငံသားတို့အားလည်း လုံခြုံ စိတ်ချလှပသောအနာဂတ်နှင့် လွတ်လပ်စွာ၊ အေးချမ်းစွာရပ်တည် စေလို၏ စသည့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများကို လည်းတွေ့ရမည်ဖြစ်သလို အခွင့်အရေးကိုမျှော်၏။ လာဘ်လာဘ ကို မျှော်၏။ နေရာကိုမျှော်၏။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုခြင်းကို မျှော်၏။
|နိုင်ငံရေးလူရာဝင်လိုခြင်းအတွက် အရာရာလူတွင်ကျယ် လုပ်လိုခြင်းစိတ်ဓာတ်အား မွေးမြူသည်
့နိုင်ငံရေးသမားအရေခြုံ များကိုလည်း ခေတ်တိုင်း ခေတ်တိုင်း၊ စနစ်တိုင်း၊ စနစ်တိုင်းတွင် အလွန်တရာပေါများစွာပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရ မည်ဖြစ်၏။
အမှန်စင်စစ်နိုင်ငံရေးလုပ်ခြင်းသည် နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး ကောင်းစားရေးအား ရည်ရွယ်သည်ဟုဆိုငြားအံ့ . . .နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး အနာဂတ်ကောင်းစားစေမည့်စီမံကိန်းများ၊ မူဝါဒများ၊ ဥပဒေသ များအပေါ် သတိ်္တရှိရှိ၊ ထောက်ခံရဲဖို့လည်း လို၏။ မထောက်ခံလို သော်ငြားမနှောက်ယှက်မိဖို့လည်းလို၏။ မိမိအယူဝါဒသည်သာ အမှန်၊ မိမိနိုင်ငံရေးစနစ်သည်သာ အမှန်၊ မိမိစေတနာသည်သာ အမှန်၊ မိမိ၏တိုင်းချစ်စိတ်၊
ပြည်ချစ်စိတ်သည်သာ စစ်မှန်သော တိုင်းချစ်စိတ်၊ ပြည်ချစ်စိတ်ဖြစ်သည်ဟူသော အစွန်းရောက်ဝါဒကို လက်ကိုင်ပြုပြီး မည်းမည်းမြင်ရာ ဆန့်ကျင်၊ ကပ်ဖဲ့၊ တောင်းပွဲ၊ တိုက်ပွဲ၊ မင်းမူပွဲလုပ်ဆောင်နေကြခြင်းသည် စစ်မှန်သည့်နိုင်ငံရေး လုပ်ခြင်းဟု လူထုယုံကြည်ရန် ခက်ခဲနေမည်လည်းဖြစ်၏။ လူ့အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်(၀ါ)နိုင်ငံတစ်ခု ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျနေပြီ
ဆိုလျှင် သူရဲ ကောင်းများ၊အပြိုင်းအရိုင်းပေါ်ထွက်လာတတ်စမြဲဖြစ်၏။ သူရဲကောင်း
သို့သော် အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်း(၀ါ)နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံသားများအတွက်ကံကောင်း ခြင်းရလဒ်များ
သယ်ဆောင်လာဖို့အတွက်ဆိုလျှင် ၎င်းင်းတို့အတွက်ခက်ခဲ လွန်းသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်၏။ မူဝါဒစွဲ၊ အယူဝါဒစွဲ၊ အစွန်းရောက် အတ်္တစွဲကို အလုံးစုံပွေ့ဖက်ရင်း ငါနှင့်ငါသာ နှိုင်းစရာမရှိ၊ ငါတော်၏။ ငါတတ်၏“ထုံး” နှလုံးမူကာ ၀ါဒပြိုင်ဖို့သာ အားယူလေ့ရှိကြ၏။ အင်အားပြိုင်ဖို့သာ ကြိုးစားလေ့ရှိ၏။ အယူအဆပြိုင်ဖို့သာ အားယူလေ့ ရှိကြ၏။ နိုင်ငံတော်နှင့်လူထုအားအသုံးချဖိနင်းရင်း မိမိပါတီ၊ မိမိအဖွဲ့ အစည်း၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းအား အဓိကအားပြုခဲ့ကြသည်ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်
ဖြစ်ရပ်များအား လေ့လာကြည့်ပါက တွေ့ကြရ မည်လည်းဖြစ်၏။ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံ
ရဲသော၊ ပေးဆပ်ရဲသော၊ သူရ သတ်္တိနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၊ အရည်အချင်းဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံခြင်းရှိရုံမျှ ဖြင့် သူရဲကောင်းတစ်ယောက်၏ကြန်အင်လက္ခဏာပြည့်စုံပြီဟု ထင် မှတ်တတ်ကြသူများ၏။ အမှန်စင်စစ် အယူဝါဒတစ်ရပ်၏သားကောင် ဘ၀မှ ရုန်းထွက်နိုင်စွမ်းရှိသူလည်းဖြစ်ရမည်။ ငါသိ၊ ငါတော်၊ ငါတတ်၊ ငါ့မြင်း ငါစိုင်း၊ ငါ့လှေ ငါထိုး၊ ငါ့အမျိုး၊ ငါ့အဆွေ၊ ငါတို့တစ်တွေသာ ကောင်းစားရမည်။ ငါတို့တစ်တွေသာ အုပ်ချုပ်သွားနိုင်ရမည်ဟူသော တစ် ကိုယ်ကောင်းစိတ်အနှောင်အဖွဲ့မှ ရုန်းထွက်နိုင်စွမ်းရှိသူလည်း
ဖြစ်ရမည်။ ဘက်မလိုက်သော၊ မျှတသော၊ အဂတိတရားလေးပါးနှင့် ကင်းရှင်းသောပညာဉာဏ်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားရှိဖို့သည်လည်း အရေး ကြီး၏။ နိုင်ငံတော်နှင့်
နိုင်ငံသားတို့အကျိုးအတွက်ဆိုလျှင် မိမိတစ်ကိုယ် ရည်စိတ်ခံစားမှု၊ မကျေနပ်မှု၊ အမုန်း၊အာဃာတစသည်တို့အား ခြေ ချွတ်လျှော်ဖွပ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လည်းလို၏။ မိမိအယူအဆ၊ မိမိဆန္ဒထက် နိုင်ငံတော်နှင့်လူထုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် တစ်ပါးသူ၏အယူ အဆ၊ ဆန္ဒကို ထောက်ခံရဲ၏။ အသိအမှတ်ပြုရဲသူ၊ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်စိတ်ရှိသူလည်း ဖြစ်ရမည်ဖြစ်၏။ သို့မှသာ စစ်မှန်သောနိုင်ငံ နှင့်လူမျိုးအတွက် သူရဲကောင်းမည်၏။
“နင်လားဟဲ့ နိုင်ငံရေးသမား”ဟု လူထုအများက ရဲရဲတောက် မေးမြန်းလာသည်ရှိသော် ရဲရဲတောက်ပြန်လည်ဖြေကြား ရဲသည့် နိုင်ငံရေးသမား၊ သူရဲကောင်းစစ်စစ်ဟူသည် . . . .။
အမှန်ကိုဆိုရသော် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသည် သူရဲကောင်း ပေါများလွန်းသော နိုင်ငံလည်းဖြစ်၏။ သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်သူ၊ သူရဲ ကောင်းယောင်ဆောင်လိုသူများလွန်းသော နိုင်ငံလည်းဖြစ်၏။ သို့ သော် . . .သူရဲကောင်းများ၏ အသည်းနှလုံးကိုတည့်မတ်ရှေ့ဆောင် ပေးနိုင်မည့်စစ်မှန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပေါင်းစည်းလိုက်ပါနိုင်မည့် အမြော်အမြင်ကြီးသော၊ ပေးဆပ်စွန့်လွှတ် ရဲသော၊ ပညာနှင့်ယှဉ်သည့်ဦးနှောက်ပိုင်ရှင် နိုင်ငံရေးသမားကောင်း သည် အလွန်တရာရှားပါးခဲ့သည်ကိုလည်း မညှာတမ်းဝေဖန်ဆန်းစစ် ၀န်ခံရဲကြဖို့လို၏။မိမိအယူဝါဒအတွက် စည်းရုံးသိမ်းသွင်း မှိုင်းတိုက် ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်နှင့်လူထုအား မိမိကိုင်စွဲထားသည့်တစ်ယူသန် နိုင်ငံ ရေးမူဝါဒအပေါ် လမ်းလွဲလျှောက်တတ်လာအောင် ခေါ်ဆောင်ခြင်း၊ ဆရာမွေးခြင်း၊ တပည့်မွေးခြင်း၊ လူစွမ်းကောင်းဝါဒ၊ ထူထောင်ခြင်း၊ လူတွင်ကျယ်ဝါဒထူထောင်လိုခြင်း စသည့်စိတ်ဓာတ်ဆိုးများအား ခေတ် အဆက်ဆက်သွတ်သွင်းရင်း လူထုကိုချနင်းခဲ့ကြသည့်နိုင်ငံရေးသမား အရေအတွက်များပြားလွန်း
အနီးစပ် ဆုံးဥပမာသည်ကား . . . “မြန်မာနိုင်ငံအား ကျွန်ပြု၊ဖက်ဆစ်စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်၊ တိုင်းတစ်ပါးတို့၏ကျွန်သဘောက်ဘ၀တွင် ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုး များသည် စည်းရုံးခဲ့ကြ၏။ ညီညွတ်ခဲ့ကြ၏။ တွဲလက်မြဲခဲ့ကြသည်ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင်တွေ့ရ၏။ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ကနဦး ဖောင်ဒါများဖြစ်သည့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း၊ သခင်စိုး၊ ရဲဘော်ဗတင်(ခ) ဂိုရှယ်၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်ဗိုလ် လက်ျာ၊ သခင်ဗဟိန်း၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်သိန်းဖေ၊ ဗိုလ်မှူး ချုပ်ကျော်ဇော၊ သခင်ဗသိန်းတင်စသဖြင့် သူ့ကျွန်ဘ၀တွင် မြန်မာတစ် မျိုးသားလုံးလွတ်လပ်ရေးအတွက် ကျရာတာဝန်အား ထမ်းဆောင်ရင်း ညီညွတ်ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်၏။
နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားတို့၏ အကောင်းဆုံးအကျိုးရလဒ်အတွက် ဘုံဆုံမှတ်တစ်ခုသို့ ရောက် သောအခါအယူဝါဒ၏ သားကောင်များဘ၀မှရုန်းထွက်နိုင်စွမ်းမရှိ သူများဖြစ်ခြင်း၊ အလွန်တရာ အတ်္တကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊
နိုင်ငံတော် နှင့်လူမျိုးအတွက် မိမိသြဇာ၊ မိမိအာဏာ၊ မိမိနေရာအား ပိုမို သာလွန်၍ မက်မောခုံမင်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ခြင်းများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့ရသော ဖြတ်သန်းမှုများကို ရင်စည်းခံခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်၏။ မှတ်မိသေး ၏။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏လူထုနှင့် နိုင်ငံတော်သည်သာဟူသော ပေးဆပ်
စွန့်လွှတ်ရဲသည့်ခေါင်းဆောင် စိတ်ဓာတ်အား မယှဉ်သာသည့်အခါ ခြေရာတိုင်းကြတော့၏။ ပခုံးချင်းတိုက်ကြတော့၏။ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ကြရန် တာစူခဲ့ကြ တော့၏။ ထင်ရာစိုင်းခဲ့ကြတော့၏။ မင်းဘာလဲ၊ ငါဘာလဲ သေး သိမ်သော လွဲမှားသည့်နိုင်ငံရေးအယူအဆတစ်ခုကို ကိုင်စွဲကာ သွေးကွဲခဲ့ကြတော့၏။ သပိတ်ဆုံ၊ သူပုန်ထလမ်းကြောင်းကို လွဲမှား စွာကိုင်စွဲရင်း လမ်းလွဲခဲ့ကြသည့်နိုင်ငံရေးသမားများထဲတွင် အမှား အများဆုံး၊ အပြစ်အများဆုံး နိုင်ငံတော်နှင့်
လူထုအတွက် အမှောင် တိုက်ထဲသို့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ဆွဲခေါ်ရင်း ပြည်တွင်းစစ်အား မီးမွှေးခဲ့ကြသည့်သူရဲကောင်းယောင်ဆောင်ခဲ့သည့်နိုင်ငံရေးသမားသူရဲကောင်းအတုများကိုတွေ
မြန်မာ့လွတ် လပ်ရေး၏ ရှေ့တော်ပြေး ၁၃၀၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံကြီးနှင့်အတူ ရဲရဲတောက်ပေါက်ဖွား
ခဲ့ကြသည့် ပြည်သူ့ဘက်တော်သားသူရဲ ကောင်းများသည် ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ဉာဏ်ပညာကို ရှေးရှုပြီး အယူဝါဒတစ်ရပ်၏ သားကောင်ဘ၀မှ ရုန်းထွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း ကြောင့် ဘေးထိုင်ဘုပြော၊ ကပ်ဖဲ့ယက်ဖဲ့နိုင်ငံရေးနှင့်တောင်းပွဲ၊ တိုက်ပွဲ၊ သပိတ်ဆုံ သူပုန်ထလမ်းကြောင်းကို သမိုင်းကြောင်းမလှပ စွာ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံသားအားလုံးသည် နိုင်ငံတော်နှင့်အတူ
မြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ရ၏။ ရလဒ်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာအာဏာရှင်စနစ်အောက်တွင် လူလုံး မလှ၊ အပူလုံးကြွ၊ အနာဂတ်ဆိုး၊ ကြောက်လန့်မှုအမျိုးမျိုးနှင့် ရှင်သန်ခဲ့ကြရသည်ကိုသာ ရလဒ်အဖြစ် ကျန်ရှိသည်ကို ယနေ့နိုင်ငံ ရေးသမားသူရဲကောင်းများ သတိပြုစေချင်လှ၏။ မိမိတို့နိုင်ငံရေး လုပ်ခြင်းသည် နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက် နိုင်ငံရေး လုပ်ခြင်းဟုသေချာပါ၏လော။ ရဲရဲမေးက ရဲရဲဖြေရဲသော ဒေါင် ဒေါင်မြည်နိုင်ငံရေးသမားများ၊ အများအပြားပေါ်ထွက်လာမှသာ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွှေပြည်တော်သည် မျှော်တိုင်းမဝေးနိုင်တော့မည်လည်း ဖြစ်၏။ သေရဲ၊ သတ်ရဲ၊ တောင်းရဲ၊ တိုက်ရဲ၊ဆူပူအုံကြွ၊ အာဏာ ရှင်များအလိုကျကပြလိုကြခြင်းသည် သူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်မဟုတ်။
နိုင်ငံရေးသမားစိတ်ဓာတ်မဟုတ်၊ ငတေမာစိတ်ဓာတ်သာဖြစ်သည် ကို နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်နှင့်ဋ္ဌ
လူထုအား တောင်းပန်ဝန်ခံသွားသည့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ၏ လုပ်ရပ်ကသက်သေခံခဲ့ပြီလည်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်ပင် ကွန်မြူနစ်ဝါဒလက်ဦးဆရာကြီး သခင်စိုးကြီးသည် မသေခင်ကာလအတွင်း ပြည်တွင်းစစ်၏ တရားခံမှာ မိမိတို့သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့၏လမ်းစဉ်အမှား၊အတွေးအခေါ်အမှား၊ အယူ အဆအမှားများအား ဘ၀နေ၀င်ချိန်တွင် လူထုအား၊ ခွင့်လွှတ်ရန် ပန်ကြားခဲ့၏။ ၀န်ခံခဲ့၏။ ယခုအခါ အမှားလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ မျိုးဆက်သစ် နိုင်ငံချစ်သူတို့အား သွေးထိုး၊ မြှောက်ပင့်၊ စည်ရုံး၊ သိမ်းသွင်း၊ တပည့်မွေး၊ ဆရာမွေး၊ တောင်းလိုက်၊ တိုက်လိုက်၊ ရင်ဆိုင်လိုက်၊ တစ်ကျော့ပြန်သပိတ်ဆုံ သူပုန်ထ လမ်းကြောင်းပေါ် သို့ မိမိကိုယ်ကျိုးအတ္တအတွက် အသုံးချလိုသည့် မစစ်မှန်သောသူရဲ ကောင်းများ၊
နိုင်ငံရေးသမားများ၊ နိုင်ငံချစ်သူများ၊ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာနေပြန်ပြီလည်းဖြစ်၏။ ချုပ်ရသော် . . .စည်းလုံးညီ ညွတ်ခြင်းဖြင့် လူထုအားလုံးမျှော်လင့်သည့် ရွှေပြည်တော်အား အလှပဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ။ တည်ဆောက်နိုင်သည့် နိုင်ငံ ရေးသမားသူရဲကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ သမိုင်းသင်ခန်းစာတို့အား ယူတတ်သူများဖြစ်ကြပါစေ။ လူထုမှ နင်လားဟဲ့ နိုင်ငံရေးသမား ဟု လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြီး မေးမြန်းလာသည့်အခါ ရင်ကော့ ခေါင်းမော့ရင်း
နိုင်ငံနှင့်လူထုအကျိုးအတွက် ပေးဆပ်အနစ်နာခံ ရသော နိုင်ငံရေးသမား သူရဲကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်သည်ဟု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေ ကြားနိုင်သည့် လိပ်ပြာပိုင်ရှင်နိုင်ငံရေးသမားများအများဆုံးပေါ် ထွက်လာပါစေဟု မ၀ံ့မရဲဆုတောင်းနေမိပါတော့သတည်း။